Big News:- Wadahadaladii Gaalkcyo kasocday oo bur buray iyo Madaafic lagu Garacay Gaalkcyo | All idamaale News
Big News:- Wadahadaladii Gaalkcyo kasocday oo bur buray iyo Madaafic lagu Garacay Gaalkcyo
Posted Date: 15 Jun 2017 in: news,Puntland,Somalia 0 Comments
Wadahadaladii lagu ballansanaa in la isugu tago dhanka Galmudug ayaa baaqday maanta lamana oga sababta rasmiga ah ee keentay baaqashadooda, waxaase la rumaysan yahay in ay la xiriirto falkii xalay lagu laayey dad shacab ah ee ka dhacay deegaanka Balibusle koonfurtiisa, aagga Ceel Lalehay.
Dhinacyada ku lugta lahaa wadahadlka ayaan ilaa iyo hada wax war ah uusan ka soo bixin oo ku saabsan sababta keentay baaqashada shirka oo awal horey loo qabtay 2 kulan oo kamid ah, hadana burburkiisa la sadaaliyey.
Wararkii ugu danbeeyey ee weerarkaas lala beegsaday maatada Ceel Lahelay ayaa sheegaya in dhimashadu tahay 5 qof oo hal qoys ka soo wada jeeda.
Dhanka kale, waxaa Caawa fiidkii Galbeedka Magaalada Gaalkacyo madaafiic lala beegsaday aagga Maxjarka. Wax khasaare ah lama sheegin illaa iyo hadda.
Dad ka dhawaa aagga madaafiicdu ku soo dhacday oo diiday in la magacaabo ayaa Allidamaale u sheegay in aysan jirin wax khasaara ah oo ay Madaafiicdu geysatay waxayna intaas ku dareen in dhanka Puntland ay sidoo kale rasaas ku jawaabtay.
Ma jidho cid Masuuliyiinta labada dhinac ka tirsan oo weli ka hadashay dhacdada xasuuqa shacabka.
Sannadkii hore ayaa Dowladda Puntland waxay dhistay maxjarka Galbeedka Magaalada Gaalkacyo. Madaxweynihii hore ee Galmudug, Cabdikariin Guuleed, ayaa ku goodiyey in aan marna la dhisi doonin Maxjarka, deedna iclaamiyey dagaal ka dhan ah. Illaa iyo hadda masuul Galmudug iyo waliba madaxweynaha cusub ee Galmudug kama aysan hadlin weerarada lala beegsado maxjarka Gaalkacyo.
Maxjarka Gaalkacyo ayaa hadda ah mid dhammaystiran laakiin aan weli la hawl gelin, lana iclaamin goorta uu hawl bilaabi doono.